MDF Desk Mercury Sphygmomanometer - BaganMart
Floor Stands for Illuminator Cabinets
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 225 view counts
Model : MDF-808
လုပျငနျးအမညျ : Nyi Nyi Shin Thant Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 01 294694,206312,09 780630037
Usage : Used in all leading nursing homes and hospitals.
Configuration : Desk
Carton Size : 430x330x370mm
kgs/ctn : 23/22
First grade quality - virgin material used.Purity of mercury 99.99% due to assured triple distillation process.0 to 300 mm of Hg scale with elegant finish, fine numbering and durable background contrast paint for clear visibility.Fused type, permanent graduation marking on the glass tube.Special control valve for perfect pressure drop.Best quality cuff for getting excellent grip.Proven rubber material like Bag and Bulb to give more durability.Surface plating adapted to all exposed metal parts to prevent corrosion.Classic Hi-stove painting to the body of the instrument to withstand in any climate.Optimum damping effect provided for easy and fast measurement.
ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက် သင့်ဘဝရဲ့အဖော်မွန်အဖြစ် ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပြီး ကျန်းမာသောဘဝများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဆေးပစ္စည်းကိရိယာအတွေ့အကြုံနှစ်(၃၀)ရှိ ပညာရှင်များကိုယ်တိုင် စက်ရုံများသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာမှာကြားပြီး ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် အာမခံချက်ရှိသော ဆေးပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးပေါင်း(၃၀၀)ကျော်ကို ထုတ်လုပ်တင်သွင်းပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ လက်လီ၊လက်ကားဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါသည်။
For MDF Desk Mercury Sphygmomanometer
May I get the quotation for "MDF Desk Mercury Sphygmomanometer" ?